महिलाले चरम सुख कसरी प्राप्त गर्छन् र कसरी थाहा पाउने ? - chiyagaff
महिलाले चरम सुख कसरी प्राप्त गर्छन् र कसरी थाहा पाउने ?
अशोज २, २०७८ अशोज २, २०७८ Chiya GaffLeaveaComment on महिलाले चरम सुख कसरी प्राप्त गर्छन् र कसरी थाहा पाउने ?
जब कुरा चरम सुख प्राप्तिको हुन्छ, यसका विभिन्न तरिकाहरु छन् । हिजोआज त इन्टरनेटको माध्यमले पनि तपाईंं कसरी चरम सुख प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
तर, महिलाहरुलाई भजाइनल अर्गेज्म प्राप्त गर्न सजिलो छैन, किनभने यो कुनै नियम पुस्तक होइन, जसको आधारमा चरम सुख प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै महिलाहरुलाई केवल पेनिट्रेसनले मात्र पनि चरम सुुख प्राप्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
हालसालै भएको एउटा सर्वेक्षण अनुसार करिब ७० प्रतिशत महिलाहरुलाई पेनिट्रेटिव से’क्सको माध्यमबाट चरम सुख प्राप्त हुँदैन । जर्नल अफ सेक्स एन्ड म्यारिटल थेरापीमा प्रकाशित अर्को अध्ययनका अनुसार केवल एक महिलालाई मात्र भजाइनल स्टिमुलेशनबाट चरम सुख प्राप्त हुन्छ ।
त्यस्तो स्थितिमा यदि पेनिट्रेटिव से क्सको माध्यबाट तपाईंं चरमा सुख प्राप्त गर्न सकिरहनुभएको छैन भने यी साधारण तरिकाहरुलाई अपनाएर चरम सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
क्रियाकलापको माध्यमबाट खुशी, सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुछ भने यौ’न पूर्व गरिने क्रियाकलापमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सम्पर्क राख्नु अगाडि शा’रीरिक र मानसिक रुपमा आफू र आफ्नो पार्टनरलाई तयार गर्ने तरिकालाई फोरप्ले भनिन्छ ।
चुम्बन, मसाज गर्नु, पार्टनरलाई कसेर अंगालोमा बाँध्नु जस्ता सबै कुराले तपाईंलाई यौ’नका लागि तयार गर्न र चरम सुख प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पु¥याउँछ । फोरप्लेको माध्यमबाट महिलाहरु आनन्दको महसुस गर्छन र यौ”न सम्पर्कका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा रमाउन थाल्छिन् ।
आफ्नो शरीरलाई यौ’न र चरम सुखका लागि तयार गर्ने अर्को राम्रो तरिका सेल्फ लभ अर्थात् मास्टरबेसनका केहि तरिकाहरुलाई अपनाएर आफूलाई कुन कुराले धेरै खुशी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईंंको से’क्स पार्टनरसँग डर्टी टक गर्न, यौ’ न सम्बन्धित खेल खेल्दा र विभिन्न किसिमका आवाज निकाल्नु तपाईंंको लागि अति नै फाइदाजनक हुन्छ भन्दा तपाईं आश्चर्यमा पर्न सक्नुहुन्छ । त्यस्ता सबै कुराहरुले पनि तपाईंंलाई चरम सुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ ।
प्रायः महिलाहरु आफ्नो शरीरको विशेष अंग अर्थात् भजाइनामा ध्यान नदिने गल्ती गर्छन । जब आफ्नो भजाइनाको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ । तब तपाईंंलाई पेनिट्रेशनको माध्यमले तपाईंं भिन्दा–भिन्दै किसिमका चरम सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यसैले आफ्नो बारेमा पनि थाहा पाउन आवश्यक छ ।
घास काट्न गएकी आमा भर्खरै भारतमा फेला, कस्ले लग्यो ? ९ बर्सिय छोरीको आमालाई यस्तो सन्देश
सँसारकै अनौठो कुण्ड जहाँ अगाडी गएर ताली बजाए माथि आउँछ पानी
भदौ ९, २०७८ भदौ ९, २०७८ Chiya Gaff
‘सातसय वर्षदेखि पुजिँदै खप्पर’
असार २१, २०७८ असार २१, २०७८ Chiya Gaff